December 2019 - ALANZAYAR
အသည်း ကွဲလို့ ခေါင်းလျှော် ရည်သောက်ပြီး မိမိကိုယ်ကို သတ်သေ လိုက်တဲ့ မိန်းကလေး ဗီဒီယိုဖိုင်
အသည်း ကွဲလို့ ခေါင်းလျှော် ရည်သောက်ပြီး မိမိကိုယ်ကို သတ်သေ လိုက်တဲ့ မိန်းကလေး ဗီဒီယိုဖိုင် ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူနဲ့ လမ်းခွဲရမယ် ဆို ရင်တော့ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်နာကျင်ခံစားရမှာပါ ။ ဘယ်လောက်ပဲ ကိုယ်ကစွန့်ပစ်ခံခဲ့ရသူဖြစ်နေပါစေ အချိန်ကပြန်ပြီးကုစားပေးမှာပါပဲ ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ချို့သောဆယ်ကျော်သက်တွေ အတွက်ကတော့ အသဲကွဲနာကျင်ခံစားရတဲ့ဝေဒနာကို ဖြတ်ကျော်နိုင်ဖို့အတွက် ပြင်းထန်တဲ့အတိုင်းအတာတွေ […]
အချစ်မှာ ရုပ်ရည်မလိုကြောင်းသက်သေပြခဲ့တဲ့ စုံတွဲ.
အချစ်မှာ ရုပ်ရည်မလိုကြောင်းသက်သေပြခဲ့တဲ့ စုံတွဲ. လက်တလော လူမှုကွန်ယက်မှာ ရေပန်းစားနေတာကတော့ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသူ အချောအလှလေး Kwan Dii နဲ့ သူမရဲ့ ချစ်သူတို့ရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ Kwan က အသားရေ ဖွေးဖွေးလေးနဲ့ မိန်းမချောလေးတစ်ယောက်ဆိုတာ သေချာပေမယ့် သူမရဲ့ချစ်သူကတော့ ဆန့်ကျင်ဘက်ပါဘဲ။ သူမရဲ့ချစ်သူကတော့ အမည်အရင်း […]
လကျတှဖွေ့ဈသူ အမှနျပြောကျကငျးခဲ့တဲ့’ခါးနာ ဒူးနာ အကွောတငျ အကွောကိုကျ အဆဈအမွဈကိုကျအတှကျ” လကျတှေ့ ဆေးနညျး
လကျတှဖွေ့ဈသူ အမှနျပြောကျကငျးခဲ့တဲ့’ခါးနာ ဒူးနာ အကွောတငျ အကွောကိုကျ အဆဈအမွဈကိုကျအတှကျ” လကျတှေ့ ဆေးနညျး ‘ခါးနာ ဒူးနာ အကြောတင် အကြောကိုက် အဆစ်အမြစ်ကိုက်အတွက်” သက်ရင်းကြီးမြစ်ဆိတ်ရိုးလိမ်းပေးရင်အရိုးအစစ်အမြစ်ကိုက်အတွက် ( ဒေါက်တာအောင်နိုင် – ဆေးသုတေသန ) ဆေးနည်းမှအစွမ်းထွက်ပြီးသိသူများကြပါတယ် ။ ယခုဆေးနည်းမှာလူသိနည်းသဖြင့်ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ် လက်တွေ့ဖြစ်သူများအမှန်ပျောက်ကင်းခဲ့တဲ့ဆေးနည်းပါ ။ တစ်လောကရွာမှ […]
စုံထောကျဉာဏျရှိတဲ့ ဖုနျးပွငျဆိုငျကိုမှ လော့သှားဖှငျ့ခိုငျးမိတဲ့ ဖုနျးသူခိုးရဲ့ အဖွဈ
စုံထောကျဉာဏျရှိတဲ့ ဖုနျးပွငျဆိုငျကိုမှ လော့သှားဖှငျ့ခိုငျးမိတဲ့ ဖုနျးသူခိုးရဲ့ အဖွဈ ၁၅.၁၂.၂၀၁၉ ရက်​​နေ့ ၁၀၀၀ အချိန်​ခန့်​တွင်​ ​ကျောက်​ဆည်​မြို့ ​ရွှေရတီ မီးပွိုင့်​ အနီးရှိ T.Mobile အ​ရောင်း ဆိုင်​တွင်​ အမျိုးသား တစ်​ဦး မှလာ​ရောက်​၍ Redmi Note အမျိုးအစား အနက်​​ရောင်​ နှင့်​ အပြာနု​ရောင်​ […]
“အံ့ဖွယ်တရုတ်ကွန်ဖူးသမားရဲ့ ရေထဲမှာ ခုန်ပြနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်
“အံ့ဖွယ်တရုတ်ကွန်ဖူးသမားရဲ့ ရေထဲမှာ ခုန်ပြနိုင်တဲ့ စွမ်းရည် တရုတ်ရဲ့ ကွန်ဖူးသမားတွေဆိုတာ ရုပ်ရှင်ထဲမှာပဲ ရှိတယ်လို့ ထင်ခဲ့ဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ အပြင်မှာရှိတယ်ဆိုရင်တောင် ကျန်းမာရေးအတွက် ကွန်ဖူးကစားတဲ့သူတွေပဲ လို့လည်း တွေးမိကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဆီမှာ ကွန်ဖူးကို ရူးသွပ်ပြီး အသည်းအသန်လေ့ကျင့်ကြသူတွေလည်း အများကြီး ရှိသလို၊ သူများနဲ့ မတူတဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ နာမည်ကျော်လာသူတွေလည်း […]
ခရီးစရိတ်ပြတ်ပေမယ့် သား ဇောနဲ့ မြစ်ကြီးနားအထိ လမ်းလျှောက်ပြီး ရှာနေတဲ့ အဖေ
ခရီးစရိတ်ပြတ်ပေမယ့် သား ဇောနဲ့ မြစ်ကြီးနားအထိ လမ်းလျှောက်ပြီး ရှာနေတဲ့ အဖေ မြစ်ကြီးနားမြို့ကိုသားပျောက်လို့ရှာရင်စရိတ်ပြတ်ကာလမ်းလျှေက်ပြီး သွားနေတဲ့ အဘိုးအိုကို ဒီနေ့ ညနေ 4နာရီလောက်က ကသာအင်းတော် လမ်းပေါ် ကသာမြို့အထွက် သုံးခွရွာအနီး လူတစ်ယောက် အထုတ်လေးတစ်ထုတ်နဲ့ လမ်းလျှောက်လာတာမြင်လို့ ကားလေး ခဏရပ်ပြီး ဦးလေးဘယ်လဲလို့မေးလိုက်မိတယ်။ ဒီနားတင်တဲ့ ဒီနားက […]
ဆေးရုံပေါ်ကနေ မြန်မာအိုင်ဒေါ ပရိတ်သတ်တွေကို စိတ်မကောင်းစွာ အသိပေးလိုက်တဲ့ ဒိုင်ဖြစ်သူ အောင်ကိုလတ်
Myanmar Idol ပြိုင်ပွဲဟာ သီဆိုယှဉ်ပြိုင်သူတွေသာမကဘဲ အစီအစဉ်တင်ဆက်သူ ကျော်ထက်အောင်အပါအဝင် အရည်အချင်း ပြည့်ဝတဲ့ ဒိုင်တွေကြောင့် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိက အရေြး ကီး ဒိုင်လို့ ပြောရလောက်အောင်ကို ပညာအရည်အချင်းမြင့်မားသူကတော့ ဦးအောင်ကိုလတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ဂီတအပြင်၊ သရုပ်ဆောင် အနုပညာ၊ ဒါရိုက်ပိုင်းတွေပါမှာ ထူးချွန်သူ […]
“ကှမျးယာဆိုငျရောငျးကောငျးခွငျးရဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြ” ကွမ်းယာဆိုင်​ဖွင့်​၍ စီးပွားရှာလိုသူများအတွက် နည်းလမ်း​ကောင်း ကွမ်းဝယ်ရာတွင် စီးပွားရေးအမြင်အရ ကွမ်းရွက်သေးသေးကိုသာ ဝယ်ရမည်။ အရွက်သေးပါက ပိဿာလိုက် ဝယ်ယူရာတွင် ရွက်ရေများများပိုရသဖြင့် ကွမ်းယာအရေအတွက်ပိုခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကွမ်းရွက်ကို အရင်း(အရိုး)ဘက်နှင့် အဖျားဘက်ကို ညှပ်ထားရသည်။ ကွမ်းရွက်ကို ရေဆေးပြီး ဒိန်ချဉ်နှင့်စိမ်ကာ ကွမ်းဘန်းထဲတွင် ညီညီညာညာ မျှတ လှပအောင် […]
”လူတစ်ရပ်ကျော်ရှည်တဲ့ ဆံပင်ကို ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ ဆရာမလေး” ရဲ့ ချစ်စရာဓာတ်ပုံများ လူမှုကွန်ရက်မှာ ခေတ်စားနေ”
”လူတစ်ရပ်ကျော်ရှည်တဲ့ ဆံပင်ကို ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ ဆရာမလေး” ရဲ့ ချစ်စရာဓာတ်ပုံများ လူမှုကွန်ရက်မှာ ခေတ်စားနေ” မြန်မာမိန်းကလေးတွေရဲ့ အလှအပဟာ ဆံကေသာလို့ ဆိုရင်လည်း ရပါတယ်… “မိန်းမတို့ ဘုန်း ဆံထုံး..” လို့လည်း ဆိုရိုးစကားရှိတာပဲလေ ဒါပေမဲ့ ယနေ့ခေတ်မှာတော့ ဆံပင်တွေကို ဆေးဆိုး အတိုညှပ်ပစ်တဲ့ အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုတွေကို မြန်မာမိန်းကလေးတွေရဲ့ […]
ယောက်ျားလေးတွေ ချစ်သူကိုလမ်းခွဲချင်ပြီဆိုရင်လုပ်တတ်တဲ့ အပြုအမူ(၅)မျိုး
ယောက်ျားလေးတွေ ချစ်သူကိုလမ်းခွဲချင်ပြီဆိုရင်လုပ်တတ်တဲ့ အပြုအမူ(၅)မျိုး အချစ်ရေးတစ်ခုဟာ အဆုံးသတ်မှန်းဆရ အရမ်းခက်ခဲပါတယ်။ ဘယ်သူမှ ကွာရှင်းဖို့လက်ထပ်ခဲ့တာ မဟုတ်သလို၊ လမ်းခွဲဖို့ လက်တွဲကြတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အဆုံးသတ်ရတော့မယ့် အချိန်ရောက်ရင် သိသာတဲ့ လက္ခဏာလေးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ စွန့်လွှတ်သင့်တဲ့သူကို ဆုပ်ကိုင်မထားပဲ စွန့်လွှတ်လိုက်တာဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားခြင်းပါပဲ။ တကယ်လို့ […]